Kala jarista saacadda Ikea Lottorp ama Klockis - Ikkaro
Inicio >> Dib-u-warshadaynta elektaroniga iyo farsamada dheryaha >> Kala goynta saacadda Ikea Lottorp ama Klockis
€ 5? Weli ilo jaban oo ka kooban? Gudaha Amazon waxay ku iibisaa € 13 maxaa waali ah, dukaanka waxaad ku haysaa € 5
Muuqaalka qarxay ama sida loo kala furto saacadda
Waxaan istaagay saacadda ka hor anigoo ka fikiraya inay shaqo fudud noqonayso. Laakiin waxay u muuqataa in kuwa Ikea aysan rabin inaan aragno aaladda gudaha. Ma jiro fur, tab maahan, mana kala dillaac jirka oo dhan waa hal xabbo. Waan fiiriyaa oo fiiriyaa oo kaliya foodda ayaa hadhay. Markaa xanuun dhan oo qalbigayga ku jira ayaan halkaas u tegayaa, runtii ma loo baahan yahay in sidan oo kale loo sameeyo?
Waxaan kaaga tegayay fiidiyoow aragtida qarxisay, laakiin dhibaatooyin ayaan ku qabaa sixitaankiisa. Haddii aan helo waan ku dari doonaa. Runtu waxay tahay inaysan nadiif ahayn :-( Waxaan u kala jabay qayb aan loo baahnayn, anigoo u maleynaya in cadaadis la igu saaray aniga oo aanan joojin fikirka haddii ay jirto wado kale. lataliye wanaagsan.
Haddii aad rabto kala fur fur nadiif ah raac talaabooyinka soo socda:
waa inaad qeybta hore ku qaaddaa shaandheeye tusaale ahaan balaastigga oo u muuqda mid difaac leh.
Waxaad ka heli doontaa istiikarka daboolaya geeska oo dhan, iyada oo bareelaha uu raadinayo, meesha god ka jiro oo aad ka qodayso, waxaa jira boolal umana baahnid inaad wax xoog ku muquuniso
Sawirka soo socda, fiiri labada qaybood ee dhanka bidix, waa furaha in si fiican loo kala furfuro.
Markaad aragtay sida loo kala furfuro. Faahfaahinta saacadda digniinta ah gudaheeda ayaan uga tagayaa. Dhamaantiin waa wax iska fudud mana arko waxyaabo badan oo faa'iido leh runtii. Laakiin sanduuqaas yar ee cad ee dhawaaqa sameeyaa waa dahabka taajkii.
Waxaan u furaa si aan u arko sababta ay u buuqayso, oo fiiri. A dareeraha booska makaanikada. Waxaan horey u ogaanay sida loo xakameeyo booska saacada si loo muujiyo hal qaab ama mid kale. Sawirka waa jiif, laakiin runtii tan, saacadda alaarmiga waxay u socotaa si qumman, sidaa darteed kubbadda birta ah waxay had iyo jeer taabanaysaa labo jibbaarane. Waxay ila tahay hab caqli badan iyo inaan ku celcelin karno mashaariic badan.
Mar kasta oo saacaddu rogmato, qaabka iyo midabka shaashadda ayaa is beddela. Tani waxay uun samaynaysaa nalalka leh RGB uu hogaaminayo
Hal sawir oo dheeri ah si aad u aragto qaybta kale ee guddiga iyo sida ay u yar tahay ka faa'iideysiga wareegga.
Jabso dhawaaqa ama sida loo joojiyo dhawaaqa markasta
Dhamaadka Lottorp waxaan bilaabay inaan raadiyo waxa dadku sameeyeen. Ma jiro macluumaad badan, maahan in la yiraahdo, 2 ama 3 tixraac oo keliya, haa khawano ama wax ka beddel waxtar leh. Sababtoo ah haddii ay jiraan wax dhibsanaya saacaddan, waa in mar kasta oo aad rogto ay dhawaaqeyso. Ka soo qaad in ay tahay subax hore oo aad leedahay heer kulka oo aad rabto in aad aragto waqtiga maxaa yeelay marka aad daarto nalka ayaa daaran oo waa biib. Waa wax aad u xanaaq badan waadna toosin kartaa saaxiibbadaada guriga kula wadaaga. Tani way xaliyeen
Isla marka aan ku sameeyo saacadaha aan sida caadiga ah u isticmaalno, waxaan kuu sheegi doonaa sida ay wax u dheceen.
Categories Dib-u-warshadaynta elektaroniga iyo farsamada dheryaha Tigidhka tigidhka
6 faallooyin ku saabsan "Kala-goynta saacadda Ikea Lottorp ama Klockis"
Janaayo 2, 2018 markay ahayd 10:05 pm
Ma ihi nin gacan yare ah (gacan weyn uun), laakiin waa inaan idhaahdaa waan u xiisay qoraalkaaga, mar walbana wakhti fiican baan ku haystaa inaan aqriyo .. Waxaan rajaynayaa inaad orod gasho sanadka 2018 .. :)
Janaayo 2, 2018 markay ahayd 10:17 pm
Aad baad ugu mahadsantahay taageeradaada. Had iyo jeer way is qadariyaan, runtii :) Aan aragno sida 2018 u dhacdo, shaqada iyo qoysaska aad ayey u adag tahay in lala socdo heerka daabacaadda
January 11, 2018 at 11:54 subaxnimo
Waxa aan runtii jeclaan lahaa in aan ogaado waa in iskudhafka (uC) uu kujiro mugdiga madow ee guddiga ...
Janaayo 11, 2018 markay ahayd 12:55 pm
Hagaag, uma maleynayo inaan ku caawin karo :-(
Abriil 20, 2020 markay ahayd 6:54 pm
Aad u faa'iido badan! Mahadsanid! Waxaan u baahday inaan kala furfuro saacadan oo iga ilaalisay inaan burburiyo
Abriil 22, 2020 markay ahayd 8:25 pm
Haddii aad ogaato wax kale oo waxtar yeelan kara, ha ka waaban inaad nala soo socodsiiso.